सोमबार जन्मिएको मानिसको भविष्य र आचरण कस्तो हुन्छ ? - हिमगाथान्यूज
Home धर्म दर्शन सोमबार जन्मिएको मानिसको भविष्य र आचरण कस्तो हुन्छ ?
सोमबार-१. सोमबार जन्मेका व्यक्तिहरुको स्मरण शक्ति निकै तेज हुन्छ ।२. तपाईं मृदुभाषी हुनुहन्छ तर तपाईं निकै मुडी हुनुहुन्छ ।३. तपाईं निकै संवेदनशील हुनुहुन्छ त्यसकारण निकै चाँडै नर्भस हुनुहुन्छ ।४. तपाईंलाई आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन निकै रमाइलो लाग्छ ।५. तपाईंका लागि सम्बन्ध निकै महत्व राख्नेछ ।६. तपाईं पढाईमा तिक्ष्ण हुनुहुन्छ र आफ्नो करियरमा निकै माथि पुग्नुहुन्छ ।७. सोमबार जन्मने महिलाहरु भविष्यमा निकै माया र केयर गर्ने श्रीमतीको रुपमा परिचित हुन्छिन् ।
Previous articleजहाँ सोमबार पुरुषलाई जे गरेपनि छुट
Next articleएक किलिक गर्नुहोस् त ! शिब भगवान कैलास पर्वतमा साक्षात देख्नु भयो भने लाईक गरेर दर्शन गर्नुहोस्